Sabti, Nov 21, 2020-Qarramada Midoobey” Waa in la helaan waddo gargaar lagu gaarsiiyo dadka ku dhibaateysan gobolka Tigrayga – LaacibOnline
Sabti, Nov 21, 2020-Qarramada Midoobey” Waa in la helaan waddo gargaar lagu gaarsiiyo dadka ku dhibaateysan gobolka Tigrayga
Qarramada Midoobey” Waa in la helaan waddo gargaar lagu gaarsiiyo dadka ku dhibaateysan gobolka Tigrayga
Sabti, November, 21, 2020 (HOL) -Qarramada Midoobey ayaa walaac xooggan ka muujineysa xaalada bani’aadannimo ee ka jirta gobolka ay dagaalladu ka socdeen ee Tigrayga, waxeyna dalbatay in si KMG loo joojiyo xabadda.
Warka ka soo baxay Qarramada Midoobey ayaa imaneya xili la soo warinayo xaalad bani’aadannimo tii ugu xumeyd oo soo food saartay dadka rayidka ah ee ku go’doonsan deegaannada lagu dagaalamayo.
”Waan in la helaan tub ama dariiq gargaarka loo baahan yahay lagu gaarsiiyo dadka rayidka rayidka ah ee ku dhibaateysan deegaannada ay dirirtu ka socto” ayeey sheegtay QM.
Laakiiin labada dhinacba waxaad moodaan in aysan marnaba u dhaga-nuglaan baaqyada is daba jooga ah ee ka imanaya hay’addaha caalamiga, iyaga oo taa badalkeeda sii wadda howlgalada militari.
Sabti, November, 21, 2020 (HOL) – In ka badan 50 Ardey Soomaaliyeed ah ayaa lagu waramayaa in ay ku go’doonsan yihiin gobolka Ismaamulka Tigreyga gaar ahaan magaalada Mekelle halkaasoo ay ka socdaan dagaallo culus oo u dhaxeeya dowladda Itoobiya iyo jabhada TPLF.
← Ciyaartoy Mangala oo ku biiray Man City
Former Somali leader, Twin Cities professor is mourned →
Arbaco, Oct 7 , 2020-Dabley hubaysan oo weerar jid gal ah ka geystay Mandhera
Khamiis, Jun 25, 2020-Madaxweyne Farmaajo “ waa in cid kasta oo Soomaaliya maamuus gaara siisaa maalmaha xorriyadda”